Hoggaamiye Abu-Sayaaf ee Ururka Daacish oo La dilay
Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in gacanta lagu soo dhisay sidoo kale xaaska hoggaamiyaha la dilay.
Weerarkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa lagu sheegay in lagu bartilmaansaday hoggaamiye Abu- Sayaaf oo xukuumadda Washington ay ku sheegtay in uu ahaa ninkii ururka Daacish u qaabilsanaa dhanka dhaqaalaha, kaasoo suuqa madow ku iibin jiray saliidda, iyadoo dhaqaalaha ka soo baxa uu ururka Daacish u fuliyo weerarada uu soo qaado.
Aqalka Cad ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu shalay gelinkii dambe ku amray wasaaradda gaashaandhigga in ay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq ay fuliyaan hawlgalkaasi.
Xaaska hoggaamiyaha la sheegay in la dilay ayaa sidoo kale gacanta lagu soo dhigtay taasoo lagu magacaabaa Umma Sayaaf, oo hadda lagu hayo xarun uu Mareykanku ku leeyahay dalka Ciraaq iyo sidoo kale weerarkaasi xoriyadeeda dib loogu soo celiyey gabar yar oo ka tirsan bulshaa Yasiidi ee halkaasi lagu haystey.
Bernadette Meehan oo ah afhayeenka guddiga amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegtay in wax khasaare ah uusan ciidanka hawl-galkaasi fuliyey uusan soo saarin.